Bayalwe ngokubaluleka kokuhamba umtholampilo | News24
Bayalwe ngokubaluleka kokuhamba umtholampilo
Omunye wabahlengikazi abebekhona ngesikhathi kuqhutshwa umkhankaso wokugqugquzela ukuhamba umtholampilo kwabakhulelwe.ISITHOMBE: sithunyelwe
ABESIFAZANE abasebenzela endaweni yaseManchester e-Northdale bathole ithuba eliyingqayizivele nalapho kade behanjelwe khona abahlengikazi bomtholampilo i-East Boom Community Health Centre ngoLwesibili mhla zingama-21 kuNcwaba (August), ukuzobaqwashisa ngokubaluleka kokuhamba umtholampilo uma ngabe bezisola ukuthi bakhulelwe noma uma sebazi ukuthi bakhulelwe.
Ngokusho komphathi wakulo mtholampilo uMatron Khumalo, uthe banenkinga enkulu yokuthi abantu besifazane abaningi baqala umtholampilo wabantu abakhulelwe sekuphele ngisho amasonto angama-20 bekhulelwe. Uthe loku kufaka impilo yengane kanye nomzali engcupheni.
“Kubalulekile ukuthi abantu besifazane bafundiswe ukuze bezokwazi ngalezi zinto.Sifuna ukukhuthaza abantu besifazane ngokuthi uma eke wadlulwa yinyanga eyodwa engayanga ezinsukwini zakhe (periods) siyanxusa ukuba bavakashele umtholampilo ngokushesha ukuze bezohlola ukuthi kungabe abakhulelwe yini.
“Abantu besifazane bafika bezoqala umtholampilo sekwedlule isikhathi eside umuntu akhulelwa nokwenza kube nzima kithina ukuthi sikwazi ukuthi sihlole kahle yonke into. Uma umuntu wesifazane efika kusanesikhathi emtholampilo siyakwazi ukuthi simuhlole sibheke nezinto ezingase zibe yingozi ukuze sizokwazi ukuzinqanda kusanesikhathi,” ubeke kanje.
Laba bahlengikazi abagcinanga nje ngokuqwashisa ngokubaluleka kokuhamba umtholampilo wokukhulelwa kusanesikhathi kodwa baphinde baqwashisa nangokuhlolwa kwesibeletho nabathe abantu besifazane kumele kube yinto abayithathela phezulu.
“Abantu abanganqeni ukuthi basivakashele emtholampilo wethu ngoba siyazenza zonke lezi zinto kanti futhi sihleli sivulile ubusuku neminini zonke izinsuku. Kumele balisebenzise leli thuba beze bazothola usizo kuthina.”
UMatron Khumalo uthe bayaqala ukuthi benze uhlelo olufana nalolu kodwa banesifiso sokuthi bagcine sebehambela nakwezinye izindawo bangagcini eManchester kuphela.
Uthe into eyenze ukuba baqale kule ndawo yingoba baningi abantu besifazane abasebenza khona kanti futhi bahleli besebenza isikhathi esiningi yingakho benqume ukubalethela ulwazi kanye nokuhlolwa.